Pyae Phyo (MMiTD): ♪ “သင့်ရဲ့တက်ဘလက်ကိုScanner တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း” ♫
♪ “သင့်ရဲ့တက်ဘလက်ကိုScanner တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း” ♫
သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသင့်ရဲ့ခပ်ပြားပြားScanner ကို အသုံးမပြုဘဲတက်ဘလက်ကိုသုံးစွဲကာပိုမိုမြန်ဆန်စွာscan ဖတ်နိုင်တယ် ဆိုတာကိုသိပါသလား၊ဒီဆောင်းပါးမှာတော့သင့်ရဲ့တက်ဘလက်ကိုscanner အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်စေဖို့နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရသောခပ်ပြားပြားscanner အဟောင်းနဲ့အရည်အသွေးမြင့် ပုံတွေကိုscan ဖတ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်သင့်ရဲ့တက်ဘလက်နဲ့scan ဖတ်တာ က မြန်ဆန်မှုနဲ့အဆင်ပြေပြေသုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့သင့်device ရဲ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုပြီးပုံမှန်scanner ရဲ့ scanဖတ်မှုအချိန်ရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းလောက်သာကြာမြင့်နိုင်မယ့်အရည် အသွေးမြင့်ပုံတွေကိုscan ဖတ်နိုင်စေဖို့သုံးစွဲနိုင်သောscanner apps များ ကိုမီးမောင်းထိုးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့တက်ဘလက် နဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေရိုက်ယူတဲ့အခါသင့်ရဲ့scanner ကဖတ်သလိုမျိုးစာရွက်တွေကို အပြား လိုက်ရရှိစေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့သော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြမယ့်apps တွေကခေါက်ရိုးတွန့်တွေ ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သလိုစာမျက်နှာခေါက် လိုက်တဲ့အခါလိမ်ဖယ်နေတဲ့စာသားများကိုဖြောင့်တန်းစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်စာရွက်စာတမ်းတွေရဲ့အစွန်းပတ်ပတ်လည်မှာရှိနေမယ့်ဘောင် တွေကိုဖယ်ရှားပေးမှာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့scanner မှာလိုပဲလုပ်ဆောင် နိုင်မယ့်များစွာသောစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအသုတ်လိုက်ဖတ်နိုင်မယ့်batch-scanning စနစ်နဲ့ဓာတ်ပုံနဂ္ဂတစ်တွေကိုဖတ်နိုင်မယ့်စနစ်တွေကိုသင့် တက်ဘလက်ကလုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။သင့်တက်ဘလက်နဲ့ scanဖတ်ရာမှာအခြားသောအသုံးတည့်တဲ့အချက်တစ်ခုကသင့်အနေဖြင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်းဘယ်လောက်အထိscan ဖတ်မလဲဆိုတာကိုရွေးချယ် နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်များစွာ သော စာမျက်နှာတွေ ဖြစ်နေပါစေပေါ့။
Scanner app တစ်ခုကိုမ၀ယ်မီသင့်တက်ဘလက်မှာရှိနှင့်ပြီးသော apps တွေကscan ဖတ်နိုင်သလားဆိုတာကိုသေချာအောင်စစ်ဆေးသင့်ပါ တယ်။Android အတွက်Google Drive(www.snipca.com/12894) ဆိုတဲ့ app တစ်ခုမှာအောက်ခြေညာဘက်မှာပါရှိတဲ့scan ခလုတ်ကိုတို့ထိပြီး စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုသင့်ရဲ့တက်ဘလက်နဲ့ရိုက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့ရိုက်ယူလိုက်တဲ့အခါသင့်ရဲ့Online Drive account သို့ချက်ချင်းပေါင်းထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ဆောင်ချက် ကတော့iOS version (www. snipca.com/13027) မှာမပါရှိပါဘူး။
Evernote appကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (iOSနဲ့Android အတွက် https://evernote.com/evernote) မှာရယူနိုင်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာပါရှိတဲ့ကင်မရာကိုတို့ထိပြီးကင်မရာမျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ခြေဘယ်ဘက်ကကင်မရာ သင်္ကေတလေးကိုတို့ထိကာDocument Camera ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့ အခါEvernoteကအပြစ်အနာအဆာများကိုဖယ်ရှားပြီးသင့်ရဲ့account ထဲ မှာသိမ်းဆည်းပေးသွားကာအွန်လိုင်းမှနေပြီးကြိုက်နှစ်သက်ရာdevices တွေ နဲ့access လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
<Scan ဖတ်ထားသောdocuments များကိုစာသားများ ပြင်ဆင် တည်းဖြတ်နိုင်အောင်ပြောင်းလဲခြင်း>
Optical Character Recognition(OCR) ဆိုတဲ့feature ဟာScan ဖတ်ထား သောdocuments တွေရဲ့စာသားတွေကိုဖတ်နိုင်ပြီးသင်တည်းဖြတ် ပြင်ဆင် လို့ရနိုင်မယ့်စာသားအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။များစွာသောscanner apps တွေကဒီအံ့အားသင့်ဖွယ်ရာနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားကာ အဲဒီ အတွက်အခကြေးငွေပေးပြီးသုံးစွဲနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဥပမာ တစ်ခု အနေနဲ့CamScannerကAndroid မှာရောiOSမှာရော ရရှိနိုင်ပြီးOCR လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပေါင်းထည့်ဖို့Android ရဲ့free ဗားရှင်းမှာCamScanner HD (www.snipca.com/13058)ကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးသင့်အနေဖြင့် လိုင်စင်နဲ့full version ကို(www.snipca.com/13052) မှာ£1.16နဲ့download လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကScan ဖတ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်လို့ရနိုင်တဲ့စာသားများအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီးသင် Scan ဖတ်ထားတဲ့စာသားများကိုစာလုံးများ၊စကားစုများရိုက်ထည့်ကာ ရှာဖွေမှုများလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။iOSဗားရှင်းဖြစ်တဲ့Cam Scanner+(www.snipca.com/13057) ကလတ်တလော£1.49ကျသင့်ပြီး Android မှာပါဝင်တဲ့feature အားလုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Droid Scan Pro PDF (www.snipca.com/12958)ကGoogle Drive နဲ့Evernoteတို့ရဲ့OCR tools တွေကိုပေါင်းထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ သင့် အနေဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုစာသားများအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါ အဆိုပါစာသားများကိုယင်းapps များမှလည်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြတ်ပြင်ဆင် မှုများလုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမှာစုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံ နဂ္ဂတစ်အဟောင်းတွေများစွာရှိပြီးတချို့ကတော့မူလပုံတွေထုတ်ထားတာ မရှိကြပါဘူး။သင့်အနေဖြင့်အဆိုပါဖလင်နဂ္ဂတစ်များကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံ များအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုပါကအခမဲ့ရတဲ့Android app ဖြစ်တဲ့Helmut Film Scanner (www.snipca.com/12961) ကိုinstall ပြီးသင့်ရဲ့ဖလင်နဂ္ဂတစ် များကိုတက်ဘလက်ရဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။Helmut က ဖလင်နဂ္ဂတစ်များကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ တက်ဘလက်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သလိုအွန်လိုင်းမှာလည်းမျှဝေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။သင့်အနေဖြင့် ဖလင်နဂ္ဂတစ်အဟောင်းများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူတဲ့ အခါအလင်းရောင်အခြေအနေများကိုချိန်ညှိကာညီညီညာညာနဲ့ဖလင်နဂ္ဂတစ်ကိုဖန်သားမျက်နှာပြင်ပေါ် တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖလင်ဘေးမှာပါတဲ့အပေါက်ကလေးတွေကိုScan ဖတ်ရှုမှုရဲ့အပြင်ဘက်မှာထားရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့ရရှိတဲ့iOS app တစ်ခုဖြစ်တဲ့Pie Scanner(www. snipca.com/12984) ဟာသင့်အနေဖြင့်တက်ဘလက်အသုံးပြုကာscan ဖတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံများကို မိမိစိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေမယ့်များစွာသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။သို့သော်လည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်းဓာတ်ပုံလေးပုံအထိscan ဖတ်နိုင် မယ့်လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့အခပေးဗားရှင်းမှာသာပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး£1.99ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံများ (သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများ)ကို အဖြူရောင်စာရွက်မျက်နှာပြင်ရဲ့လက်မ၀က်လောက်အကွာအဝေးအတွင်း ထားရှိကာပုံတစ်ပုံကိုရိုက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။App အနေဖြင့်အလိုအလျောက် ခွဲခြားသွားကာတစ်ဖြောင့်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပြီးသင့်အတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။အခြားများစွာသောapps တွေလည်း ရှိနေပြီးသင့်အနေဖြင့်များစွာသောစာမျက်နှာတွေကိုတစ်ဖိုင်တည်းသို့မဟုတ်PDF တစ်ခုတည်း ဖြစ်အောင်batch-scan စနစ်နဲ့လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်ပေး နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။CamScanner HD (CamScanner+ for iOS) က ဖိုင်တစ် ဖိုင်တည်းမှာပါရှိစေချင်တဲ့များစွာသောစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအသုတ်လိုက်လွယ်လင့်တကူscan ဖတ်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။Cam Scanner မှာပါရှိတဲ့ ကင်မရာရဲ့ညာဘက်ကခလုတ်ကိုတို့ထိပြီးစာမျက်နှာများအားလုံးကိုဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူကာ (Free ဗားရှင်းကတော့၃မျက်နှာအထိပဲခွင့်ပြုပါတယ်) save ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
iOSအတွက်TinyScan(www.snipca.com/13063) က£2.99 ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအသုတ်လိုက်scan ဖတ်နိုင်ကာ ဘောနပ်စ်အနေနဲ့အဆိုပါဖိုင်များကိုသင့်ရဲ့Wi-Fi network မှနေပြီးအခြား သောdevices များကိုပို့လွှတ်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
<သင့်ရဲ့တက်ဘလက်မှနေပြီးScan ဖတ်ထားသောပုံများကိုprint ထုတ်ခြင်း>
အကယ်၍သင့်မှာcloud printer တစ်ခုရှိတယ်ဆိုလျှင်များစွာသောscanner apps တွေမှာပါရှိတဲ့cloud-printing tools ကိုအသုံးပြုကာprint ထုတ်နိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါapps တွေကတော့CamScanner, TinyScan,Genius Scan နဲ့Droid Scan Pro PDF တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ သင့်မှာ သမားရိုးကျWi-Fi ပရင်တာတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုလျှင်အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ တက်ဘလက်နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်စေမယ့်app ကိုသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ iOSသုံးစွဲသူ များအဖို့‘Print n Share’ (www.snipca.com/12999, £2.99)ကိုပထမဆုံး သုံးစွဲကြည့်သင့်ကာအဆိုပါapps ကသင့်ရဲ့တက်ဘလက်နဲ့Wi-Fi printer ကိုကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသော်လည်းကောင်း၊သင့်ရဲ့network ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့USB ပရင်တာနဲ့သော် လည်းကောင်း print ထုတ်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီapp ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ခုက သင့်အနေဖြင့်များစွာသောdevices တွေကနေprint ထုတ်နိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါ တယ်။PrinterShare(www.snipca.com/13053) ကAndroid မှာရနိုင်တဲ့ အလားတူapp ဖြစ်ပြီးအဆိုပါapp မှunlimited printing လုပ်ချင်တယ်ဆို လျှင်£7.45 ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍သင့်အနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပရင်တာအမှတ်တံဆိပ်များရဲ့ အကန့်အသတ်နဲ့သာရနိုင်မယ့်app တစ်ခုအတွက်ငွေကြေးအကုန်အကျ ခံချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။များစွာသောပရင်တာထုတ်လုပ်သူတွေကသူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်iOSနဲ့Android apps တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပြီးအဆိုပါapps တွေက သင့်ရဲ့တက်ဘလက်နဲ့ပရင်တာကိုWi-Fi သို့မဟုတ်Wi-Fi Direct
(မကြာသေးမီကထွက်ရှိခဲ့တဲ့နည်းပညာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးdevices များ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့router တစ်လုံးလိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့နည်းပညာ)နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။Apps များဖြစ်တဲ့Brother iPrint&Scan, Cannon Mobile Printing, Epson iPrint, HP ePrintနဲ့Lexmark Mobile Printing တွေကအရည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေ ပါတယ်။သို့သော်အကယ်၍သင့်မှာအဆိုပါပရင်တာတစ်လုံးလုံးပိုင်ဆိုင်ထား တယ်ဆိုလျှင်သင်scan ဖတ်ရှုထားမှုတွေကိုprint ထုတ်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။